ID ihu nke iPhone X bụ afọ abụọ tupu asọmpi ahụ | Akụkọ akụrụngwa
Ha na-akwado ya na Reuters, doro anya ma kwụ ọtọ: ID nke iPhone X bụ afọ abụọ tupu asọmpi ahụ. Anyị ji n'aka na ọ bụghị ndị nrụpụta niile ga-ekwenye na isi okwu a ma ọ bụ na e nweela nnukwu ọganihu n'ihe gbasara ọdịdị ihu.
N'echiche a, a na-ekwu na ruo n'afọ na-esote asọmpi Apple na teknụzụ a agaghị adakọ, ya mere ndị na-emepụta ihe ndị ọzọ na-anọ n'azụ na 3D. Nkwupụta ahụ n'onwe ya na-akọwa na ọ gaghị abụ ruo afọ ahụ mgbe ngwaọrụ sitere na ụdị ndị ọzọ ga-adị mma na nchekwa na ụdị mmata a na ọ ga-abụ n'oge ahụ mgbe ọ ga-amalite ịgbasa oke.
O doro anya na mgbe m nọ n'oge gara aga MWC na Barcelona, ​​enwere m ike ịhụ na ọtụtụ bụ ngwaọrụ ndị na-aga n'ihu na ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na mgbakwunye na nchọpụta ihu a chere, ihe na-eme ka ị na-eche ma ọ bụrụ na ha akwadoghị maka ya. Iji nye ihe atụ doro anya, na ihe omume Samsung ka egosiputara mmelite ihu na ihu ọhụụ nke Samsung Galaxy S9 na S9 +, mana n'ezie ngwaọrụ ndị a nwekwara ihe mkpịsị aka mkpịsị aka ebe ọ bụ na i scanomi ihu ha ji teknụzụ 2D mee ya Ọ na - eme ka ị chee na ha akwadoghi nke ọma dịka Apple dị, nke dị na iPhone X naanị nwere ID ID a.
Nkwupụta ahụ gụnyekwara onye nrụpụta na-arụ ọrụ na gam akporo nke ga-agbakwunye ọdịdị ihu 3D maka afọ a, mana enweghị aha ụlọ ọrụ ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya. Dị ka ọmụmụ, Apple ga-anọgide na-etinye ego na mmepe nke a technology na enwere okwu banyere ihe karịrị nde 14 na 2018, ọnụ ọgụgụ dị n'etiti iru mmadụ ole na ole na nke ahụ bụ ihe na - eme ọdịiche dị n'etiti ngwaọrụ dị ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » IPhone X's Face ID bụ afọ abụọ tupu asọmpi ahụ